မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Secret Garden review As of episode 10
Posted by mabaydar at 12:35 AM
I really like this drama review coz i am so addicted to this drama too. Pls carry on the review for other upcoming episodes.
12/15/2010 1:45 AM
အားလားလား.. warning ကြီးဖတ်ပြီးလန့်ထှာဗျာ..
ဟဂျီဝန်းက ကြာလေလှလေနုပြီးငယ်လာလေလို့ ခံစားမိတယ်။ သူ့ကားတွေအကုန်နီးပါးကြည့်ဖြစ်တယ်။
ပြန်လာရင် ကြည့်ဦးမယ် မဗေဒါ.... ခုထဲကကြည့်သွားရင် တန်းလန်းကြီး ဟိုကနေကြည့်ချင်စိတ်တွေ ထပ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့....
(ကျွန်မသာ သူ့အနားရှိလို့ကတော့ နံဘန် တစ်ချက် ၂ချက်ကျဉ်းပြီး... နင်က ဘာလို့ ကောင်မလေးကို အဲလိုပြောရတာလဲ.... နင်လဲ ချစ်ရဲ့သားနဲ့ဆိုပြီး ကိုင်ပေါက်လိုက်ချင်တယ်... ဒါမှ သူ့စိတ်ထဲက မသိသေးတာတွေ ပွင့်ထွက်သွားအောင်လို့... ဟွန်း....)
မဗေဒါရဲ့ ဒါမျိုးအရေးအသားလေးတွေကို ချစ်တာ... ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ချရေးတတ်တဲ့ မဗေဒါကို ကြိုက်တယ်.... :)
မဗေဒါရေ ကျွန်မလည်း ကြည့်နေတာ အဲဒီဇာတ်ကားကို။ အိမ်မှာ ကွန်က အရမ်းနှေးနေတော့ Funshion ကနေပဲ ကြည့်ဖြစ်နေတယ်။ ပေါက်ဖော်စာတန်းပဲ ထိုးတော့ စကားနားမလည်ဘူးပေါ့ :D ။ မဗေဒါ ရှင်းပြမှ ဇာတ်ရည်တော်တော်လည် သွားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ မဗေဒါ တင်လို့ ကြည့်ဖြစ်သွားရင် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေ ချည်းပဲ။ ထပ်တင်ပေးပါဦး။ :D တောင်းဆိုလျှက်
မဗေဒါရေးထားတာဖတ်ပြီး ဇာတ်ကားဆုံးတဲ့အထိမစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီနေ့အလုပ်ကပြန်သွားရင်စကြည့်တော့မယ်။ ဟီးဟီး....
12/15/2010 11:07 AM
အပိုင်း ၆မှာတော့ အရမ်းကို ရယ်နေရတယ်။ ပြန်စဉ်းစားရင် ပြန်ရယ်မိတယ်။ အဲ့ဒီအပိုင်းကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့ တယောက်အမူအကျင့်ကို တယောက်က သေချာကို လေ့လာထားတာပဲလို့ (ဒါရိုက်တာက သေချာသင်ပေးထားတာလဲဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပါ) တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများတွေတော့မသိဘူး နေခြည်တော့ တခါတလေမှာ စိတ်ချင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကို ကြည့်နေရင်း မေ့သွားပြီး ဇတ်ကောင်တွေ ရှုပ်ရှုပ်သွားတယ်။
မဗေဒါက Joo Won စိတ်ထဲက မသိတာတွေပွင့်ထွက်အောင် ကိုင်ပေါက်ချင်ပေမယ့် နေခြည်တော့ အဲ့လို မသိ ဖြစ်နေတာကိုပဲ ပိုကြိုက်တယ်။ သိသွားပြီး လက်ခံလိုက်ရင်တောင် သိပ်ကြည့်ကောင်းတော့မယ်မထင်ဘူး။
12/15/2010 10:27 PM
နေခြည်ရေ... အမှန်တော့ မဗေဒါက ဒီဇာတ်ကားက ဘယ်လောက် ထိရောက်တယ်ဆိုတာကို စကားအဖြစ်ပြောတာပါ.. မဗေဒါလဲ ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေလေးကို သဘောကျပါတယ်... သူ့ကိုယ်သူ သိသွားတဲ့အခါ ဇာတ်လမ်းက မြန်မြန်ပြီးသွားမှာပေါ့.. မပြီးစေချင်သေးပါဘူးတော်.. ဟဲ.. ဟဲ...
ဒီကားက ခုမှ ကိုရီးယားမှာ ပြနေတုန်းရှိသေးတယ်လေ... ခွေမထွက်သေးဘူး...
ဟဂျီဝန်း ချောတာကတော့ တကယ်ပါပဲ... သူ့ဆံပင်ပုံစံလေးနဲ့လဲ လိုက်တယ်နော်... သူက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၆ နှစ်တုန်းက ပုံအတိုင်းပဲ လုံးဝမပြောင်းဘူး.. မဗေဒါ အကြိုက်ဆုံး မင်းသမီးထဲမှာ ဟဂျီဝန်းပါတယ်...
အဲ့မင်းသမီးကို တခါပဲကြည့်ဖူးတယ်။ အဲဒီကားမှာ သူက မင်းသမီးမဖြစ်သေးဘူး။ ဗီလိန်ခန်းကပါရတာ။ သူကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုက သမီးအရင်း၊ သူ့အစ်မက မွေးစားသမီး၊ သူ့အစ်မရဲ့အမေရင်းက ချမ်းသာတော့ လာပြန်ရှာတော့ သူကသူ့အစ်မအစားလိုက်သွားပြီး အစ်မကို အမျိုးမျိုးချောက်ချရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှ သူ့အမေအတွက် သွေးသွင်းဖို့လိုတော့မှ သွေးစစ်ရင်း အလိမ်ပေါ်သွားတဲ့ကား။ နာမည်လဲမမှတ်မိတော့ဘူး။ တော်တော်ကြီးကို ကြာနေပြီ။ သူက အခုကားမှာ ပိုနုနေသလိုပဲ။ ရှယ်ပေးတာကျေးဇူး။
12/17/2010 4:57 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ အညွှန်း ကျေးဇူး မဗေဒါ ကားဆုံးအောင်စောင့်ပြီး အခွေတစ်ထိုင်တည်းကြည့်ရမယ် ကျနော်က ဇတ်ကားမဆုံးသေးပဲ စောင့်ရတာ စိတ်မရှည်ဘူးဗျ ခုလု ခုလူဖြစ်လို့း)